अघिल्लो दिन काखैमा राखेर ‘बुढा अब विदेश नजाउ’ भन्थि, भोलीपल्टै खोलामा हा’म’फा’ले’की सीताको स’ब ए’स्तो अ’व’स्थ’मा भेटीयो डोजरनै ल्याउन पर्यो निकाल्न ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
अघिल्लो दिन काखैमा राखेर ‘बुढा अब विदेश नजाउ’ भन्थि, भोलीपल्टै खोलामा हा’म’फा’ले’की सीताको स’ब ए’स्तो अ’व’स्थ’मा भेटीयो डोजरनै ल्याउन पर्यो निकाल्न ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 4, 2021 AdminLeaveaComment on अघिल्लो दिन काखैमा राखेर ‘बुढा अब विदेश नजाउ’ भन्थि, भोलीपल्टै खोलामा हा’म’फा’ले’की सीताको स’ब ए’स्तो अ’व’स्थ’मा भेटीयो डोजरनै ल्याउन पर्यो निकाल्न ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
राजु परियार धेरै वर्ष विदेशमा बसेर भर्खरै नेपाल फर्किएका थिए । उनको श्रीमती सीता परियार केही दिन देखि हराएकी थिइन् । एक जना स्थानियले उनलाई शंकास्पद अवस्थामा देखेको भनेपछि अहिले प्रहरीको सहयोगमा उनलाई खोला किनारमा खोजि गरिएको थियो । उनलाई खोलामा खोज्दा पनि फेला पर्न सकेकी थिइनन् ।
उनले कुनै गलत निर्णय लिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । आखिर लामो समय विदेश वसेर श्रीमान घर आउने वित्तिकै सीताले किन यस्तो निर्णय गरिन् भन्ने खुलेको छैन । अन्ततः शंका पुष्टि भएको छ ।
विदेशवाट आएपछि उनी पोखरा स्थित आफ्नो छोरीको घरमा गएका थिए । श्रीमतीसंगको सल्लाहमै उनी पोखरा गएका थिए । छोरीले नै आमालाई फोन गरेर बाबा आज यहीं बस्नुहुन्छ भनेर आमालाई भनेकी थिइन् । भोलीपल्ट बुवा छोरी वजारमा किनमेल गर्न जान लाग्दा घरवाट फोन आयो, तपाई छिटै घर आउनु भनेर फोन आएपछि उनी घर फर्किएको बताएका थिए । उनले घरमा यस्तो घटना भएको होला भन्ने कल्पना पनि नगरेको बताए ।
श्रीमानले परिवारमा केही विवाद पनि नभएको बताएका छन् । यो पटक कोरोनाको कारण छिटै घर आउन पाएनन् । छुट्टी भएपनि केही ढिलो विदेशवाट आएको बताए । संधै वेला बेलामा छुट्टीमा आउने गरेका थिए । यो पटक परिवारमा अंशवण्डा गर्ने कुरा पनि भइरहेको थियो ।
आफु घरमा नभएको बेलामा घटना भएका कारण परिवारका अरु सदस्यसंग केही भएको हो की भनेर आफुले बुझ्दा पनि कसैले केही नभएको बताएका थिए । उनले पती पत्नीको सम्बन्धमा भने कहिल्यै केही नभएको बताएका छन् । आफुले अहिले सम्म श्रीमतीलाइ तँ सम्बोधन पनि नगरेको बताएका छन् । उनले श्रीमतीले भनेकै कारण घर बनाउन लागेको पनि बताएका छन् । श्रीमतीले जे भन्यो त्यही पुरा गर्दै आएको बताएका छन् ।आज उनको स’ब भेटिएको हो निकल्न डोजर नै लेराउन परेको छ ।
बाँकी हेर्नुहोस भिडियोमाः
रंगशालालाई लिएर चर्को बिवाद अन्तर्बार्तामै हा’ना’हा’न ,कु’टा’कु’ट ,भा’गा’भा’ग ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नारायण रायमाझी र शर्मिला गुरुङले गाएको ‘राम्दी पुल’ गित सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
चर्चित गित मलाया हङकङको सफलता पछी मोडेल सोनिया लिम्बुको ‘ए माया मुसुक्क हास न ‘ बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक…..